अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्दा गभर्नरलाई सजिलो
काठमाडौं । ‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ तर संकट समाधान गर्न सरकारी नियाकहरु मिलेर काम गरिरहेका छैनन्’ आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले एकै स्वारमा भन्दै आएको विषय हो यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको मतभेद पदासिन भएको केही दिनपछि नै सार्वजनिक भएको थियो । शर्मा नेकपा माओवादीका नेता...
मेरो छानविनको लागि बनेको समितिको मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले म प्रति उठेका विषयहरुको जवाफ दिन्छु यो मेरो दायित्व हो । मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेको बेला बद्मासी गरें र म अनैतिक भएँ । आज यो प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ, फेरिपनि जे देखियो अहिले एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा...
काठमाडौं । भनिन्छ टाठाबाठाले सोझा साझालाई बैधानिक रुपमा ठग्ने बजार हो सेयर बजार । यो साता यस्तै भयो । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता ९६२ रुपैयाँ ५० रुपैयाँसम्मका कारोबार भएको अपर तामाकोशीको सेयर गत साता ३७६ रुपैयाँमा झरेको थियो । सस्तोमा सेयर किनेर हल्ला चलाउने र तत्काल नाफा कमाउने वर्गको लागि राम्रो आधार बनेको थियो । यहिबेलामा नयाँ परिदृष्य देखियो ।...
काठमाडाै् । सरकारले खानेपानी क्षेत्रको सुधारकाे लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन एसडिआर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएकाे....
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग नजिकिने प्रयास गरेका छन् । यसअघि आन्तरिक विवादमा रूमल्लिएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी केही साता यता भने नजिक भएका हुन् । स्रोतका अनुसार....
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड १ को बिक्री खुला, १० वर्षपछि योजना परिपक्व हुने
नेपालीले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउनु पर्छ : सरोजकाजी तुलाधर
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । कारोबार खुलेको केही समयमै ओरालोको यात्रा तय गरेको नेप्से परिसूचकले आधा कारोबारपछि उकालोको यात्रा तय गरेको हो । दिनभरको...
लन्डन । टर्कीको वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुनमा लगभग ८० प्रतिशतमा पुग्यो र यो लगभग दुई दशकमा उच्चतम स्तर हो । उपभोक्ताको मूल्यहरु गत महिना जुन २०२१ को तुलनामा ७८.६ प्रतिशतले बढ्यो । खाना, पेय...
सरकारी कार्यालय नै गर्छन् पेट्रोलको उधारो कारोबार, करोडौंको भुक्तानी बाँकी
‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले वस्तुको मूल्य बढायो’
काठमाडाैं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दैनिक बढिरहेको छ । आज एकै दिन ११३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो । मङ्गलबार मात्र ९० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्य तथा...
फेरी बढ्यो हवाइ भाडा, यस्तो छ नयाँ मूल्य
काठमाडाैं । जाईमेन किङ्ग युनाईटेड लङ्ग अटोमोटीभ लिमिटेडले उत्पादन गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको नेपाली बजारमा विक्री वितरणको शुभारम्भ गरेको छ । श्री इकाे भिजनरी प्रालिले यसलाई नेपाल भित्र्याएकाे हाे । १४ सिट क्षमताकाे याे...
८ कक्षा पास गरेका ३७ जनालाई राष्ट्र बैंकमा जागिर
द रोयल गोर्खा ओभरसिजले दुबईमा काम लगाइदिने भन्दै करोडौं ठगी गरेको आरोप
नबिल बैंकका नवनियुक्त सीईओ ढुङ्गानाले सम्हाले पदभार, कम्पनी थप उचाईमा पुग्ने
यी हुन् नेपालीले रोजगारीका लागि जान पाउने देश
मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको पाँचौँ कार्यपालिका बैठकले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक निर्णय गरेको हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता...
‘आखिर हुने भनेको एक्लै त हो’
पशुहरूले बासस्थान भेटेको, उनीले पति जलाएको यो पशुपतिले मलाई मेरो धरातल सम्झाएको हुन्छ । धेरै भएको थियोे महादेवले मेरो दर्शन नपाएको । धेरै भएको थियाै मैले मलाई भुलाएको ।आज पनि त उस्तै भिड छ...
वेटलेस र बोर्डरलेस उत्पादनमा फोकस गरौं- डा.विश्वास गौचन
ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर मूल्य माथि हुनुपर्थ्यो- महेश शर्मा ढकाल
महिन्द्राले यसरी सार्वजनिक गर्यो स्कर्पियो (फोटो फिचर)